Nanakalazaina androany tetsy amin'ny HJRA Anosy andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny aretina mamany lava. Tonga nanotrona izany ireo teo anivon'ny fikambanana manerantany momba ny fahasalamana, sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana, notarihin'ny talen'ny kabinetra, ary ireo mpitsabo eo anivon'ity Hopitaly ity. Nisy ny fitsidihina ireo trano lay izay misy an'ireo vehivavy voakasik'izany aretina mamany lava izany. (Jereo Sary Tohiny)
Nisy androany ny dinika naraham-panomezana teo amin'ireo sefo Fokontany miisa sivy, izay mandrafitra ny fari-piadidian'ny Poste de Police Antaniavo Antohomadinika (PPA4), ho fanamafisana ny fiaraha-mientana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Niaraha-nidinika ny fomba handrindrana sy hampitana maika ny vaovao mikasika ny fandriampahalema isaky ny Fokontany, izay fehezin'ireo sefo Fokontany ankilany, ary ny PPA4 andaniny. Mila vaovao haingana sy maripototra mikasika ireo izay mbola manaratsy endrika ny fiarahamonina ny Polisy manoloana ireny asa ratsy ireny. Notolorana finday mateza mandeha tsy tapaka andro aman’alina ireo sefo Fokontany miisa sivy manodidina. Eo koa ny fiatrehana ny fifidianana ho avy izao mba hisorohana izay mikasa hanao korontana.
Mainty hoditra, mpanefoefo any Etazonia i Robert F. Smith. Fanomezana natolony ireo mpianatra andihany 2019 miisa 400 vao nahavita fianarana ka nandray diplaoma, omaly alahady, ny nanambarany fa hoefainy avokoa ny trosan’ireo mpianatry ny oniversiten’i Morehouse any Atlanta ireo, izay mitentina 40 tapitrisa dolara na 35 tapitrisa euros. Horakora-pafaliana no nandraisan’ny mpianatra izany, sady nandray diplaoma no afa-trosa. Any Amerika dia mitrosa vola be tokoa ireo mpianatra hanefana ny saram-pianarana rehetra.
Nanome fandraisana anjara fanomezana hanaovana iftar ho an'ny mpino silamo teto Mahajanga ao anatin'izao volana Ramadany izao ny faritra Boeny, izay notarihan'ny lehiben'ny Faritra. Teto amin'ny Mosquée du Vendredi no nanolorana izany omaly. (Jereo Sary Tohiny)
Nahatsapa ireto lesoka eto amin’ny firenena na sosialy na politika na toekarena ny Fivondronamben'ny Eveka nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireto teto Antananarivo ny 08 ka hatramin’ny 16 mey 2019, ka nilaza tamin’ny hafatra fa : Na mameno trano Fiangonana aza ny Kristianina dia tsapa fa tsy mbola mafy orina ny finoana ka mihena ny fandraisana Sakramenta. Tsy tafita ny fandalinam-pinoana.
Natao tetsy Ankorondrano andrefana ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny reny sy ny zaza ary ireo be antitra. Izao dia tafiditra ao anaty asa sosialy ataon'i RALAMBOMANANA Fenoherintsoa, na i Feno, sy RAZAFINDRAZAKA Bodoharisoa Faliherinantenaina na i Bodo mpihira, kandida ho solombavambahoaka eto amin'ny Boriborintany faha III, mitondra ny laharana 01 amin'ny lisitra natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Anisan'ny vina entin'izy ireo ny ametrahana lalàna hitsonjovana ny fahasalamam-bahoaka, indrindra ho an'ny reny sy ny zaza ary ireo be antitra, izay tokony ahazo fitsabonana maimaim-poana. (Jereo Sary Tohiny)
Fanadiovana, fandokoana ireo rindrina ivelany sy anatin’ny efitrano fianarana sy ny solaitrabe ary fanomezana sakafo ara-pahasalamana toy ny koba aina sy vary ireo ankizy mpianatra no nisantaran’ny Foibem-pitantanana ny raharaha Sôsialy sy Politika (DASP) eo anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika ny asa tagnamaro teo amin’ny EPP Iavoloha androany 15 may 2019. Nisy ihany koa ny fambolena zanakazo maromaro tao anatin’ny faritry ny sekoly. Manana efitrano fito ny EPP Iavoloha ary ahitana mpianatra 530. (Jereo Sary Tohiny)
Tao Bemanevika Sambava no nitrangan’ity herisetra ara-nofo ity ny 18 martsa 2019. Lasibatra tamin’izany i Raelisoa Canizia, izay zazavavy kely vao 09 taona monja. Nitondra takaitra mihitsy ilay zaza, satria rovitra ny fivaviany sy ny lava-bodiny. Ny anadahin-drenin’ilay zaza ihany no nahavanon-doza. Efa herinandro taty aorian’ny fanolanana vao tsikaritry ny ray aman-dreniny fa hafahafa ilay zaza. Ity farany izay niaritra sy nanafina ny nanjo azy noho ny fandrahonana ho faty nataon’ilay dadatoany, nanolana azy.
Fiandrianam-pirenena: Mila Tafika matanjaka
Jerena ivelany dia hoe nahoana no nahafoy miaramila roa maty, ary maromaro hafa naratra, nanavotra olona roa mpizahatany voatazona takalon'aina. Fa izay no antsoina hoe fiandrianam-pirenena, raha vao ny olom-pirenena any aminy no misy mahazo azy, dia ny Firenena, ny Tafika no tonga manavotra azy, ny Firenena tsy miondrika fa midaroka izay mikasika ny olom-pireneny. Frantsay 2 no nisy naka takalon'aina tany Burkina Faso, Bénin, tonga tany an-toerana anavotra ireo Frantsay ireo ny commando frantsay, lavo ny miamamila roa, nisy no naratra, avotra kosa ny takalon'aina frantsay roa, ary nisy koreanina tatsimo sy amerikanina koa tao anatin'ireo takalon'aina avotra, izay efa nandritra ny fanavotana vao fantatra ny fisiany tao.